मैले पनि थाहा पाएँ विप्लवजीहरुले मलाई मार्दै छन् रे : प्रचण्ड - Jhilko
मैले पनि थाहा पाएँ विप्लवजीहरुले मलाई मार्दै छन् रे : प्रचण्ड
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नकेपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई मार्नका लागि विप्लव समूहले कार्यकर्ताहरु खटाएको सूचना प्राप्त भएको बताएका छन् ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज वाइसीएलले आयोजना गरेको शहीद परिवार सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ”मलाई नै एक नम्बरमा मार्न खोजिरहनु भएको छ रे, मलाई मार्न उहाँहरुले केही साथीहरु पनि खटाउनु भएको छ रे ! मलाई ती साथीहरु देख्दा दया मायाँ लाग्छ ।”
कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ”प्रचण्ड बन्छु भनेर हिड्या पनि होइन । हिँड्दै मलाइ जनताले प्रचण्ड बनाइदिए । अब एकै पटक यो देशमा दुई वटा प्रचण्ड जन्मिन सक्दैन । प्रचण्डकै नक्कल गरेर प्रचण्ड हुन्छु भन्यो भने त्यो भ्रम हो । त्यो भ्रमले कहीँ पनि पुगिदैन । मैले हिजोका साथीहरुलाई लगातार यो सल्लाह दिइराख्या छु ।”
यस्तो छ प्रचण्डले गरेको भाषण
आज बिहान सरकारतर्फबाट मलाई पनि जानकारी गराइयो मलाई उहाँहरुले मार्ने योजना बनाउनु भएको छ रे ! के भा होला साथीहरुलाई ?
मलाई मारेर यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त जाँदैन । क्याविनेटमा भनेको कुरा त तपाईहरुले पत्रपत्रिका, अनलाइन फेसबुकमा पनि हेर्नुभयो होला । राज्यले गर्ने कुरा त ऐन कानून संविधान अनुसार गर्छ । तर मुख्य कुरा त हामीले परिस्थितिलाई ठीक ढंगले बुझ्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र विश्लेषण गर्ने कुरा हो । परिस्थिति अनुसार बढ्ने कुरा हो । म यतिबेला महान् शहीद र उनीहरुका परिवार, घाइते, आपाङ्ग तथा बेपत्ता योद्धाहरुको योगदानलाई स्मरण गर्दै विप्लवजीहरुलाई आग्रह गर्छु कि तपाईहरु एक पटक निधार खुम्च्याएर सोच्नुहोस् । परिस्थिति बुझ्नुहोस् । अहिले नितान्त २०५२ साल जस्तो परिस्थिति छैन ।
यो २०७५ साल हो । ठूलो परिवर्तन हाम्रै कारणले आएको छ । यसलाई उल्ट्याउने भनेको फेरि नेपाललाई निरंकुशतातर्फ लैजानु हो ।
हामीले काम त गर्नु पर्ने धेरै छ तर निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो कान्तिका सबै सपना पूरा भएका छैनन् । हामी समाजवादतर्फको यात्रामा अगाडि जाँदै छाँै । समाजवाद रातारात आउने कुरा होइन । त्यसका लागि राष्ट्रिय पूँजिको विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी सबैको दर्बिलो एकताको आवश्यकता छ ।
साताको अन्तिम दिन पूँजी बजारमा चकम फर्कियो, कारोबार रकममा तेजी
नायिका कलाले गरिन महोत्सवमै रोमान्स
‘कोरोनाको केन्द्रबिन्दु चीनमै भएकाले जोगियो भारत जस्तो...
बेलायती अर्थशास्त्री जीम ओ निलले कोरोनाभाइरस विरूद्ध चीनले गरेको प्रयास र व्यवहारको...
सगरमाथा सफाई अभियान चलाइने
पत्रकार सम्मेलनमा सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल...
काङ्ग्रेसमा कारवाहीको तयारी यसरी हुँदैछ
काङ्ग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको आज बसेको पहिलो बैठकले पार्टी हित विपरीत कार्यमा...
खाना पकाउने ग्याँस सस्तियोः प्रति सिलिण्डर आठ सय
अब घरेलु एलपिजी ग्याँसको मूल्य भारतीय रुपैया चार सय ९४ रुपैया ३५ पैसा अर्थात नेरु...